SomaliTalk.com » Digreeto Ra’iisul wasaaraha DFKMG oo burisay wareegtooyinka ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha ee ku saabsan magacaabidda Gobolo ….
Digreeto Ra’iisul wasaaraha DFKMG oo burisay wareegtooyinka ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha ee ku saabsan magacaabidda Gobolo ….
Dicreeto uu soo saaray ra’iisul Wasaaraha DFKMG ee Soomaaliya ayaa shaca ka qaaday in “wareegtooyinka ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha ee ku saabsan magacaabidda Gobolo iyo Demooyin cusub iyo dalacsiin Saraakiil Dawladeed ee aan soo marin habka sharcigu qeexayo in ay sharciga dawliga ah ka hor imaanayaan lana dhaqangalin karin”.
Dicreetada waxaa ku cad sidan: “Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya, isagoo tixraacaya qodobada kor ku xusan iyo Go’aankii Golaha Wasiirada ee 13kii August 2012, wuxuu halkan ku caddaynayaa in wareegtooyinka ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha ee ku saabsan magacaabidda Gobolo iyo Demooyin cusub, dalacsiin Saraakiil Dawladeed iyo wixii lamid ah ee aan soo marin habka sharcigu qeexayo in ay sharciga dawliga ah ka hor imaanayaan lana dhaqangalin karin sida kucad qodobka 3aad ee axdiga (Sarraynta Sharciga) Farqadiisa 2aad oo qeexaya “Sharci kasta oo aan la soo marin ama ka hor imanaya Axdiga Dawladda wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan.”
Halkan ka akhri Dicreetada
Dicreetada Ra’iisul Wasaaraha DFKMG ka akhri halkan
Arrintan ayaa daba socota kaddib shirkii golaha wasiirada ee Aug 13, 2012 in lagu go’aamiyey “Digreeto kasto oo soo baxday oo aan soo marin Golaha Wasiiradda, Sida magacaabista Degmooyinka, Xilalka, Dalacsiinta iyo IWM iney tahay sharci darro waxayna keeni kartaa iney lunto Kalsoonida Shacabka uu ku qabo dowladda.”
Waxaa taas ka horeeyey Shirkii ay yeesheen golaha wasiirada DFKMG maalintii Khamiista Agoosto 9, 2012 ayey ku go’aamiyeen “in magacaabista Degmooyinka cusub ee aan Golaha la horkeenin aysan waafaqsanayn nidaamka dowliga ah, sidaas darteedna laga soo bilaabo 01, July 2011 ilaa 31, August 2012 wixii dagmo ah oo la magacaabay ay yihiin sharci darro.”
Taas waxaa garab socdey laba wareegto oo la faafiyey Khamiistii 9 Agoosto 2012, oo uu soo saaray madaxweynaha DFKMG, Sheikh Shariif, oo qeexaya in laga soo bilaabo taariikhda 22 july 2012 in degmooyin loo aqoonsaday Buula Jadiid oo ka tirsan gobolka Bokool iyo Dolondoole oo ka tirsan gobolka Bay. (Akhri wareegtooyinkaas)
Laakiin sida ku cad wareegtada rasmiga ah ee golaha wasiirada (Ref: XRW/OM/PR 00226/07/12) “laga soo bilaabo 01, July 2011 ilaa 31, August 2012 wixii dagmo ah oo la magacaabay ay yihiin sharci darro.” Taariikhdaasi waxaa soo hoos geleya xilliga uu madaxweynaha DFKMG sheegay in uu magacaabay degmooyinka cusub.